DDoS Weerarrada iyo Ilaalinta ka hortaga Botnets Talooyin Nadaafadeed
Sida ku xusan amarrada botmasters, botnets ayaa afduubay tiro badan oo kombuyuutarada ah si ay u fuliyaan hawlo sharci darro ah. Awooda noocan oo kale ah waxay u sahlaysaa kuwa internetka in ay sameeyaan dembiyo kala duwan online. Inta badan, dambiyadani lama ogaan karo oo waxay dhaawici karaan sumcadda ururkaaga marnaba. Tusaale ahaan, sannadka 2016, khabiir gaar ah ayaa loo adeegsaday sameynta weerarrada DDoS, oo saamaynaya boggaga internetka ee warbaahinta bulshada sida Twitter. Haddii aad hesho emails badan maalin kasta, fursadaha waa in cinwaanka emailkaaga loo yaqaano spammers - chromium complex lamberts. Igor Gamanenko, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Semaat Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa sheegay, nasiib wanaag, waxaan leenahay tiro fara badan oo tiknoolajiyada farsamaysan, oo intooda badan ka caawiya kahortaga soo galitaanka farriimaha sharci darrada ah iyo kuwa laga shakiyo.
Maba iska indhatirin karno xaqiiqda ah in aysan suurtagal ahayn in laga takhaluso baaskiilada iyo emaylka spam. FBI waxay baartey guddi-hoosaadkii Senate-ka Mareykanka si ay u aqoonsadaan kombiyuutarada cudurka qaba. Natiijadu, natiijadani waxay muujisay in khaniisiinta ay kantarooli karaan kombiyuutarrada kombiyuutarrada mar kasta oo ay doonayaan. Inkasta oo baaxaddiisu tahay qaddiyaddan, celceliska isticmaalaha kombiyuutarku waxay u muuqdaan wax aan waxba ka aqoon botnets..Botnets waa ciidanka ee kombiyuutarada iyo qalab mobile kuwaas oo ay qaadeen by xaasidnimo iyo si ay u fuliyaan dambiyada online, iyada oo aan aqoonta user. Hackers, markay noqdaan, waxay ku amri karaan botnets in ay fogaan karaan waxayna weydiisan karaan inay xadaan macluumaadka xasaasiga ah, faafinta xayawaannada, emailada dirirta, diraan weerarka DDoS.
U dirista spam iyo qaybinta fayrasyada iyo khayaanada
Marka hore, waa inaad ogaataa wax walba oo ku saabsan spam. Waxaa loogu talagalay in ay kuu soo diraan emailada nacasta iyo dhibka. Qaar ka mid ah kombiyuutarada oo la jebiyey ayaa loo xilsaaray inay diraan farriimo spam ah oo ku saabsan cinwaanno badan oo email ah. Ujeedada email-kaasi waa faafinta fayraska iyo inay u adeegsadaan internetka. Waxaad noqon kartaa dhibbane emails sida maadooyinka ay bixiyaan ay u muuqdaan inay yihiin tayo sarre leh iyo sida macquul ah qiimihiisu, laakiin ololayaasha noocan oo kale ah waxay faa'iido u yihiin oo kaliya khayaanada, mana heli kartid wax faa'iido ah iyaga. Tusaale ahaan, haddii aad ka heshay emails qof isticmaala Nigeriiga oo ku andacoonaya inaad ku guuleysatay $ 140 million, waxaad u baahan kartaa inaad kaqaybqaadato ama la xiriirto isaga / gadaashiisa. Kuwani dhab ahaantii waa fariimo phishing ah oo isku dayaya in ay kufsadaan dadka isticmaala oo waxay u muuqdaan inay xadaan magacaaga iyo furahaaga.
Maskaxda ku hay, waa inaadan ka jawaabin farriimaha spam. Plus, waa inaadan ku dhejin fariimaha emailka ee aanad hubin. Dhibaatada e-mail-ka ayaa soo noqnoqotay waqtigii loo baahnaa, iyo in badan oo ka mid ah botnets waxay noqdaan kuwo firfircoon sababtoo ah. Tirada badan ee laydhka waxaa loo diraa shirkadaha ganacsiga iyo ururrada waaweyn si loogu guuleysto maaliyadeed. Shirkadaha Botnets ayaa dhawaanahan bartilmaameedsanaya shirkadaha sida Evernote iyo Feedly, oo khidadayaashu isku dayeen inay lacag ku soo rogaan khatarta weerarrada adeegga diidmada
Ma waxaan u baahannahay badbaadinta botnet?
Kombuyuutar uu ku dhacay infekshin ayaa hoos imanaya kantaroolaha oo aan kantarooli karin milkiilaha dhabta ah. Waxay si qarsoodi ah u gali doontaa dambiyada internetka waxayna sameyn karaan tiro badan oo ah hawlo sharci darro ah. Haddii si kale loo dhigo, haddii kombuyuutarkaaga uu ku faafay, si haboon uma shaqeynayo, internetka meel kasta oo aan amaan ahayn iyo kuwa aan fiicnaynba.